MACLUUMAADKA MUUQAALKA EYGA FEERYAHAN IYO SAWIRRO - EEYAHA
Greta, tusaale wanaagsan oo feedhyahan Mareykan ah
Feeryahan Jarmal ah
Feeryahanka jirkiisu waa mid is haysta oo awood badan. Madaxa ayaa la jaanqaadi kara jirka. Afka muraayada waa mid gaaban oo cakiran oo leh joogsi kala duwan. Sanku waa weyn yahay waana madow yahay sanka oo aad u furan. Daanka ayaa qaniinyo ka hooseeya. Indhuhu waa bunni madow. Dhegaha waa la saraa, ha la jaro ama ha ahaado dabiici. Markii la gooyo waxaa loo tababbaray inay madaxa kor ka istaagaan, dhibicna u taabtaan. Markii si dabiici ah looga tago dhagaha waa khafiif yihiin, horay u dhacayaan, jiifa meel u dhow madaxa. Qoorta waa inay ahaato mid wareegsan, xoogan oo muruq leh, oo aan lahayn sayax. Lugaha hore ee muruqyada waa toosan yihiin waana is barbar socdaan marka laga fiiriyo xagga hore. Lugaha dambe si fiican ayaa loo muruqsan yahay. Dabada ayaa sare loo dhigay oo badanaa waa la xidhaa. Xisbiga AKC wuxuu si daran u ciqaabayaa dabada dabiiciga ah, halka Yurub inteeda badan ay dhaqankan ka mamnuuceen. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Koodhka gaaban, jilicsan, ee ku dhow dhow wuxuu ku yimaadaa fawn, brindle, tan, mahogany iyo madow oo badanaa leh calaamado cad. Feeryahannadu sidoo kale waxay la yimaadaan jaakad cad oo aan laga diiwaan gelin karin naadiyada qaarkood.
Feeryahanku waa faraxsan yahay, xamaasad sarre leh, ciyaar badan, xiiso badan oo firfircoon. Caqli badan, diyaar u ah oo dhaqsi wax ku barta, Feeryahanku waa eey ku wanaagsan u hoggaansamida tartanka. Si joogto ah ayey u socotaa waxayna xiriir dhow la leedahay qoyska. Daacadnimo iyo kalgacal, Feeryahannadu waxay caan ku yihiin habka ay carruurta ula dhaqmaan si wanaagsan. Si fiican loo keenay iyo si habboon bulsho Feeryahanku sidoo kale wuxuu la heshiin doonaa noociisa gaarka ah iyo xayawaannada kale ee guryaha sida bisadaha . Xayawaanka sida jiirka , shinbiraha , digaag iyo shimbiraha kale ee beeraha laga yaabo inay aad u duufsadaan, si kastaba ha noqotee, waxaa la bari karaa inay 'ka baxaan' laakiin weli laguma talinayo inay keligood la joogaan. Waxaa la sheegay in magaca Feeryahanku uu ka yimid qaabkii uu Feeryahanku u jecel yahay inuu adeegsado farahiisa hore wax walba uun. Haddii aad waligaa daawatay Feeryahan ku dhex socda meheraddiisa waxaa laga yaabaa inaad dareentay habka uu ugu garaaco alaabada uu ku ciyaaro, weelka cuntada iyo adiguba arrintaas, qaab bisad u eg oo aad u ciyaareysa. Intii lagu guda jiray kaqeybgalka cayaaraha Schutzhund, Feeryahannada waxaa loo yaqaanaa inay boodaan oo ay u adeegsadaan cagaha hore sidii iyagoo feer feeraya. Iyagu waa dad qurux badan oo ciyaar badan. Dabeecadda Feeryahanku waa inuu ilaaliyo adiga, qoyskaaga, iyo gurigaaga. Soo-booqdayaasha la yaqaan waa la soo dhaweyn doonaa. Waxay had iyo jeer jecel yihiin inay shaqeeyaan oo ciyaaraan. Feeryahannadu waxay u baahan yihiin waxyaabo badan hoggaaminta aadanaha . Bar Feeryahanku inuusan noqon mid buuq badan oo gaar ahaanna uusan noqon dadka ka bood . Noocani waxaa lagu xusay geesinimo wuxuuna sameeyaa wax weyn eeyaha ilaaliya . Feeryahannadu waxay leeyihiin adeegsi ballaadhan shaqada militariga iyo booliska. Ilaaliye heer sare ah, Feeryahanku wuu xakameyn doonaa an ku soo xadgudbay si la mid ah a Bulldog sameeyo. Waxay yihiin ciyaartooy aad u fara badan, mararka qaarkood xitaa markay da 'weyn yihiin. Eygan wuxuu u baahan yahay inuu a socod baako maalinle ah . Jimicsi maalinle ah oo maskaxeed iyo jimicsi waa muhiim. La'aantiis, Feeryahanku wuxuu noqon doonaa mid sarreeya. Noocani wuxuu u baahan yahay a milkiilaha xukuma . Tababarku waa inuu bilaabmaa isagoo dhalinyaro ah oo noqdaa mid adag oo joogto ah. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeeysaa hal khadadka hogaamiyaasha si cad ayaa loo qeexay. Adiga iyo dadka kale oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Milkiilayaasha Meek Boxer waxay u arki doonaan eeyahooda inay noqdaan kuwo madax adag. Haddayna sidaas yeelin si dhab ah kuu qaado waxay noqon doonaan kuwa dhuumaaleysi ah, dalbanaya, buuq badan oo ay adag tahay in la xakameeyo. Bar Feeryahanku inuu xukumo eey kale lama aqbali karo. Calaamado kasta oo awood sheegasho ah waxay u baahan yihiin inay isla markiiba milkiilayaashu ku saxaan hab deggan, laakiin adag, kalsooni leh.
i tusi sawirada alaab soo celinta labrador
Dhererka: Ragga 22 - 25 inji (56 - 63 cm) Dumarka 21 - 24 inji (53 - 61 cm)
Miisaanka: Ragga 60 - 70 rodol (27 - 32 kg) Dumarka 53 - 65 rodol (24 - 29 kg)
Qaar ka mid ah welwelka ugu weyn waa wadno-xanuunka iyo dhibaatooyinka kale ee wadnaha, stenosis sub-aortic iyo thyroid. Waxay u nuglaan kartaa maqaarka iyo xasaasiyadaha kale. Mararka qaarkood u nugul suuxdin. Laga bilaabo da'da siddeedaad waxay u badan tahay inay yeeshaan burooyin marka loo eego noocyada kale. U janjeera kansarka . Feeryahannadu aad bay ugu nugul yihiin burooyinka unugyada . U janjeera arthritis , arrimaha dysplasia, dhabarka iyo jilibka. Eeyahaani way liqi karaan oo khuuidi karaan. Waxaa laga yaabaa inay yeeshaan calool-xumo xad-dhaaf ah, gaar ahaan marka la quudiyo wax aan iyagu ahayn cuntada eyga . Qaar ka mid ah Feeryahannada cad ayaa u nugul dhagaha.
Feedhyahannadu kuma fiicnaan doonaan aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waxay si caddaalad ah ugu firfircoon yihiin gudaha waxayna ku fiican yihiin ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah. Feeryahannadu waa kuwo xasaasi u ah heerkulka, si sahal ah ayey u kululaadaan oo si dhakhso leh ayey u qaboojiyaan
midabada eyga australia casaanka
Firfircoon, jimicsi isboorti, Feedhyahannadu waxay u baahan yihiin shaqo maalinle ah ama jimicsi, iyo sidoo kale brisk dheer, socod maalinle ah . Waxay sidoo kale ku raaxaystaan ​​inay soo qaataan kubad ama fadhiyo kale oo ciyaaro ah.
Qiyaastii 11-14 sano
2 - 10 eeyo, isku celcelis 6
Koodhka sanduuqa ee jilicsan, timaha gaaban ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya, waayo waxay ka saareysaa saliidaha dabiiciga ah maqaarka. Qaar ka mid ah Feeryahannadu waxay isku dayaan oo ay naftooda nadiif ahaadaan, iyagoo isu qurxinaya sida bisad, in kasta oo qaarkood aysan iska caabin karin in lagu rogo xaarka xayawaan kale, oo loogu yeero qubays. Noocani waa celcelis daadiya.
Feeryahan waxaa lagu horumariyey Jarmalka qarnigii 19aad. Aabayaashii Feeryahanku waxay ahaayeen laba eeyo nooca Jarmalka ah, Bullenbeiszer iyo Barenbeiszer. Markii dambe waxaa lala tallaabay awoowayaashii xoogga badnaa ee Mastiff iyo Bulldog. Feedhyahannadii hore waxaa loo isticmaali jiray dagaalka eeyga, dibijiraha dibida, jiidista gaadhiga, sida eeyaha lo'da, si ay u soo ururiyaan xoolaha una soo qabtaan ugana jaraan xayawaanka duurjoogta ah iyo bisinka ilaa ay ugaadhsadyadu yimaadaan. Markii dambe waxay noqdeen masraxyo caan ah iyo eeyaha circus. Buug-gacmeedkii ugu horreeyay ee Feedhka ayaa la bilaabay 1904. Ilaa iyo markaas eeyaha ayaa ku kala duwanaa muuqaal ahaan iyo cabbir ahaanba. Feeryahanku wuxuu caan ku yahay habka uu u adeegsado lugaha hore si uu ugu dhufto kan ka soo horjeeda, isagoo u muuqda inuu feedh yahay, oo ay u badan tahay inuu eeyga u bixiyo magaciisa. Qaar ka mid ah kartida Feerka waa ilaalin, ilaalin, shaqada booliska, shaqada militariga, goobid iyo samatabbixin, adeecid tartan, Schutzhund iyo sameynta tabaha. Bixiyeyaashu waxay tarmayaan laba nooc oo Feedhayaal ah, Feeryahan Jarmal iyo Feeryahan Mareykan ah. Feeryahanada Jarmalku waxay leeyihiin madax ka weyn guud ahaanna way ka muruq badan yihiin Feeryahannada Mareykanka.
yorkie macluumaad shih isku darka SUNTZU
Bruiser the Feeryahan markuu jiray 8 sano
'Hey Yall! Magacaygu waa Lilly! Waxaan ahay 2 sano jir waxaanan helay waligay Hooyaday iyo Aabbahay :) Waxay uun ogaadeen inaan khuurinayo DHAMMAAD habeennimo, laakiin taasi waa caadi, aabbahayna sidoo kale !! Waxaan leeyahay gabar la yiraahdo Rascal, iyadu waa a Chihuahua iyaduna aad bay iila jeceshahay. Hooyo waxay tiri waa inaan sifiican uciyaaraa laakiin waxa kaliya ee aan doonayo inaan sameeyo ayaa ah inay iyada uriso !! Waxaan u maleynayaa inaan maqlo Hooyo oo cuntadayda qaadanaysa! Waa orod !!!
Lilly Feeryahanka da'da 2 sano
Greta, Sadie iyo Kaysar, dhammaantood waa feedhyahanno Mareykan ah
pom iyo shih tzu isku qas
Bruno, (bidix) britlele 5-bilood jir ah Eeyaha feeryahan oo leh Allie (midig) oo 7 jir ah oo feeraha feerka ah, socod ku aada — Feeryahannadu waa eeyo tamar badan leh waxayna u baahan yihiin in la socdo maalin kasta iyagoon lahayn jimicsi habboon waxay naftooda geli karaan xumaan badan. Hubso inaad Feeryahankaaga dhinac uga socotid ama gadaashaada, adoo xajinaya xarigga (xiisad la'aan) waligaa ha u oggolaan inuu hortiisa ku jiido. The Hogaamiyaha xirmada ayaa ugu horeeya .
'Tani waa Midas, Feedhyahankeygii ugu horreeyay. Waxaan baaray websaydhkan si aan u helo noocyada ugu fiican qoyskayga tan iyo markii aan haysanno 3 carruur ah, kan ugu yarna wuxuu ahaa kaliya 1 1/2 waqtigaas. Wow, kama bixi karo sida CAJIIB CAJIIB AH! Cunugeyga 3 jirka ah hada wuu cadaadin karaa wuuna lebbisan karaa isagaana ku ordi kara iyada oo ku dhex wadata qalabka caruusadaha iyada oo uusan dan ka lahayn! Isagu waa kubad goofweyn, laakiin aad buu u caqli badan yahay. Wuxuu bartay 'siinta baw' 5 daqiiqo gudahood. Wuxuu leeyahay toy aan ugu yeerno 'ilmihiisa' mar walbana wuu ku ordi doonaa inuu helo haddii aad weydiiso meesha ay ku taal. Waan jeclahay Cesar Dog Whisperer oo waxaan ogaaday inuu ku saxsanaa markuu kuu sheego jimicsi eeyahaaga ! Haddii Midas jimicsi la’aan nala jooga, waad dammaanad qaadi kartaa inuu ku dhex dhuuman doono qashinka dib loo warshadeeyo si uu u abuuro ciyaar u gaar ah oo ah 'ardaaga ka buuxso weel caano ah.' Ha ku xanaaqin eeygaaga-tag wakhti aad la qaadatid isaga! Waxaan hadda raadineynaa inaan ku darno feer labaad qoyska, hana u maleynin inaan waligey yeelan doono eey nooc kale ah!
Midas Feeryahan ahaan sida eey
Beta a puppy puppy at 3 ½ toddobaad jir
'Amie qaadashada Bruno Feeryahanka loogu talagalay a socodka off-xadhig —Amie waxay awood u yeelatay inay la xiriirto Bruno inay iyadu dooneyso inuu cidhibtiisa ku xigo iyada oo wacaya iyada oo adeegsanaysa calaamada gacanta si aanu u dhaafin. Hadduu dhawr tallaabo ka hor maro waxay si fudud dhabarka kaga taabanaysaa faraha ama cod ka yeeli lahayd isna wuu gaabin lahaa. Maaddaama Amie uu yahay 100% xirmo xirmo Bruno aad ayuu ugu jawaabaa amarradeeda. Adigoon erey oran haduu Amie leexdo, Bruno wuu soo jeedsadaa. Haddii ay istaagto isagu wuu istaagayaa. Isaga oo faraxsan oo raali ka ah ayuu raacayaa iyada.
Eeg tusaalooyin badan oo Feeryahan ah
Sawirada Feeryahan 1
Sawirada Feeryahan 2
Sawirada Feeryahan 3
Sawirada Feeryahan 4
Sawirada Feeryahan 5
Sawirada Feeryahan 6
Sawirada Feeryahan 7
Sawirada Feeryahan 8
Sawirada Feeryahan 9
Sawirada Feeryahan 10
Sawirada Feeryahan 11
Sawirada Feeryahan 12
Sawirada Feeryahan 13
Sawirada Feeryahan 14
Eeyaha Feeryahan: Sawirro guryo ah oo la ururin karo
pomeranian bichon eeyo yaryar oo iib ah
iskudhafka colern xuduuda bernard